Huawei Y9 Prime 2019: Nkọwapụta, ọnụahịa na mmalite | Gam akporosis
Izu gara aga enwere ụfọdụ mkpọpu banyere Huawei Y9 Prime 2019. Ọ bụ ekwentị nke abụọ nke akara ndị China na retractable n'ihu igwefoto, mgbe P Smart Z nke ahụ bụ ọkọnọ izu ole na ole gara aga. Emechara gosipụta ekwentị a na webụsaịtị ụlọ ọrụ ahụ. Ya mere, anyị nwere ike ịma ihe niile gbasara ekwentị ọhụrụ a site na akara ndị China.
Yesnyaahụ ndị ọtụtụ nkọwa nke ekwentị. Ma ugbu a, ọ bụ n'ikpeazụ ukara, anyị na-ama mara ihe niile banyere Huawei Y9 Prime 2019. A ekwentị na na-ulo oru n'ime adịchaghị n'etiti-nso n'aka ndị nrụpụta China. Kedu ihe anyị nwere ike ịtụ anya site na ekwentị a?
Na ọkwa imewe, ọ dị ka P Smart Z nke anyị hụrụ na nso nso a. N'ihi ọnụnọ nke kwuru n'ihu retractable igwefoto, ọ na-eru nso n'ụzọ doro anya na echiche nke ekwentị niile. Ya mere, anyị nwere ike ịhụ na ekwentị na-eji ihu ya eme ihe n'ụzọ dị ịtụnanya. Mbadamba osisi ndị na-ekwe ka ahụmịhe onye na-emikpu onwe ha.
Ahịa Huawei rịrị elu na nkeji iri na ise
1 Nkọwapụta Huawei Y9 Prime 2019
Nkọwapụta Huawei Y9 Prime 2019
Nke a Huawei Y9 Prime gosipụtara dị ka a àgwà nlereanya n'ime a ahịa nke. Nhazi nke ugbu a na igwefoto a na-ewepụ anya, igwefoto dị mma, ihe nhazi dị ike na nso ya na nnukwu ihuenyo. Yabụ na ọ nwere ihe ọ bụla masịrị ndị ahịa. Ndị a bụ nkọwa ya:
Ihuenyo: 6,59 inch LCD nwere mkpebi pixel 2340 x 1080
Nhazi: Kirin 710f
Igwefoto n'ihu: 16MP
Rear igwefoto: 16 + 8 + 2MP
Usoro njikwa: Gam akporo 9 ya na EMUI 9
Njikọ: 4G / LTE, Wi-Fi, Bluetooth, USB C, GPS, SIM, GLONASS
Akụkụ: 163,5 x 77,3 x 8,8 mm
Ibu ibu: 196,8 grams
Nzube nke ụdị igwefoto a nwere ike ịbụ ihe ewu ewu na gam akporo taa. Nke a bụ ihe mmetụta 16 MP, nke na-arụ ọrụ nke ọma maka selfies. Ọ bụ ezie na n’azụ ekwentị anyị nwere igwefoto nwere okpukpu atọ, nke bụ otu n’ime ike nke ekwentị a, yana ihe ijuanya nye ọtụtụ. A na-eji ihe nrụpụta atọ nke 16 + 8 + 2 MP. Igwefoto niile nke Huawei Y9 Prime 2019 a nwere ikike ọgụgụ isi, nke ga-enyere aka melite ọrụ ha n'oge niile. Ha ga-achọpụta ihe ngosi, na mgbakwunye na inye aka foto ka mma ma nwee ụdị ndị ọzọ.
N'ime ekwentị anyị na-ahụ batrị mAh 4.000. Ọzọ nke ike nke ngwaọrụ a, ebe ọ bụ na ọ na-ekwe anyị nkwa nnwere onwe dị mma n'ụzọ dị otú a. Karịsịa ma ọ bụrụ na anyị eburu n'uche na Android Pie bụ sistemụ arụmọrụ ya, nke na-enye anyị ohere ịnwe usoro nke ntọala batrị ọzọ, maka ịrụ ọrụ batrị ka mma. Ekwughi ya ma batrị a na-ebu ngwa ngwa ma ọ bụ na ọ bụghị, anyị nwere olileanya ịnụ n'ọnụ gị n'oge na-adịghị anya. Na azụ nke ekwentị anyị nwere akara mkpisiaka akara aka, nke anyị ga-esi mepee ya. Enweghị ihe ekwuru banyere ọnụnọ nke ihu mkpọghe na ya.
A ga-ahụworị Huawei Y9 Prime 2019 a na weebụsaịtị Huawei, ọ bụ ezie na ọ bụ naanị na mba ụfọdụ. Ebe ọ bụ na na Spain ị nweghị ike ịhụ ekwentị a na weebụ na oge a. Ọ bụ ezie na n'oge ahụ Enweghị nkọwa e nyere banyere igba egbe ahụ nke ekwentị. Na weebụ, ọ dịghị ihe na-egosi banyere ọnụahịa ekwentị a ga-enwe. O nweghi ozi banyere mgbe a ga-ewepụta ya. Ya mere, anyị ga-echere obere oge iji chọpụta. Rumorsfọdụ asịrị rụtụrụ aka na ọnụahịa nke ihe dịka euro 280 iji gbanwee, mana anyị amaghị ma ha bụ eziokwu.
Anyị na-ahụ nsụgharị abụọ nke ekwentị: Otu nwere 4/64 GB na nke ọzọ na 4/128 GB. Abụọ ndị a na nsụgharị ga-enwe ike zụrụ na agba acha anụnụ anụnụ, nwa na emerald green ndo. Anyị na-atụ anya ịnwe nkọwa gbasara mwepụta nke etiti a nke ụdị ndị China na nso nso. Kedu mmetụta nke Huawei Y9 Prime 2019 a na-ahapụ gị? Nhọrọ dị mma maka nke a?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Huawei Y9 Prime 2019 bụ ọkwa ugbu a: Igwe dị n'etiti etiti yana igwefoto nwere ike iwepụ